एक अस्सी को इन्टरनेट मा सबै भन्दा मान्यता प्राप्त लोगोहरु को लागी स्पर्श क्रिएटिव अनलाइन
फ्यूचरपंक, एक डिजाईनर हो जसले इन्टर्नेटमा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त लोगोहरूमा अस्सी टच दिएका छन्। यस रचनात्मकको आँखाले गुगल, इन्स्टाग्राम र यूट्यूब जस्ता कम्पनीहरूलाई येटेरियरको सौन्दर्य प्रदान गरेको छ।
को पुनः डिजाइन तिनीहरूसँग तत्वहरू छन् जुन निश्चित उमेरका पाठकहरूले निश्चित रूपमा पहिचान गर्न सक्छन्। त्यहाँ अवरुद्ध, स्प्रे-चित्रित ग्राफिक्स MTV लोगोको सम्झना दिलाउँदछ, अधिक फीका समाप्त संग जीवन्त र vib्ग को प्रशस्त। सम्पूर्ण परियोजना यस्तो देखिन्छ कि यो VHS टेपमा रेकर्ड गरिएको थियो, र यो आकर्षणको एक ठूलो अंश हो।
लोगो समुदायमा पोष्ट गरिएको थियो आउटरन सामाजिक नेटवर्क रेडडिटबाट, सिन्थवेभ संगीत दृश्यमा समर्पित एक फोरम, र अचम्ममा, तिनीहरूले 80० प्रशंसकहरूको भावुक श्रोता भेट्टाए। म तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछ एक वैकल्पिक विगतको यात्राको लागि, तल देखाइएको लोगो मार्फत स्क्रोलिंग गर्दै। यस यात्रालाई पूरक बनाउन हामी केही गीतहरू सुन्न सिफारिस गर्छौं काभिंस्की उत्तम शैली अनुभव प्राप्त गर्न आउटरन.
8 रेट्रो शपिंग
निलो भविष्यको चीज हो। वायोलेट र फ़िरोज़ा अस्सीको दशकको विशेषता रंगहरू हुन्।
ट्विटर बर्ड चिसो, उष्णकटिबंधीय गुलाबी फ्लेमिंगो बन्न प्रयोग गर्‍यो। यो टी-शर्टको लागि कत्ति राम्रो छ?
सबै ठाउँमा सिंथेसाइजरहरू, एक स्थान जहाँ रेगेसन ट्याक्स अवस्थित थिएन। राम्रो 'ओएल समय!
यो एयरब्रश कुनै समय एक प्रख्यात रेखाचित्र प्रविधी थियो, जसमा बन्दुक समावेश थिए जसले एयर कम्प्रेसरको लागि दबाव पेंट फैलाएको धन्यवाद फैलाउँदछ। यसका साथ काम गर्ने उपकरण अत्यन्त रमाईलो थियो। टाईपोग्राफीमा प्रभाव नीलो आकाश संग मरुभूमि परिदृश्य को प्रतिबिम्बित अनुकरण, समय को एक क्लासिक।
१ TV s० को दशक र २००० को दशकमा समकालीन किशोर र वयस्कहरूको लागि MTV मनपर्ने टेलिभिजन च्यानल थियो। यसको लोगो सुरुमा थ्रीडी प्रभावको साथ एक विशाल एम थियो र एक छेउमा अक्षर टिभी, यसको प्रख्यात नारा "संगीत टेलिभिजन" मुनि। एक सफा लोगो होइन, यसको विपरित, यो एकदम अनौपचारिक थियो र यसले अझै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय लोगो मध्ये एक बनायो।
यदि यो कार्डबोर्ड सतह हो भने, यसको पुनःमास्टर गरिएको लोगोको साथ इन्स्टाग्राम लोगो।
यस महान कम्पनीको लोगोलाई सँधै बहुरंगी रंगको रूपमा चित्रण गरिएको छ। अन्तर्गत रेट्रो टाइपफेसको साथ ग्लिच प्रभावयो विश्वास गर्न सजिलो छ कि यो लोगो अस्सीको दशकमा आधिकारिक थियो।
पुरानो मूल्यमा eBay र अमेजन मा किनमेल, केटा त्यो राम्रो हुनेछ।
यो महान प्रस्ताव यस्तो छ यदि यो एक VHS टेप हो, निर्दोष।
मुहान - Reddit
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » ईन्टरनेटमा सब भन्दा मान्यता प्राप्त लोगोमा एउटा रेट्रो टच